चाडपर्वमा सुनको भाउमा भारी गिरावट, किनेर राख्ने बेला यही हो त ? Bizshala -
चाडपर्वमा सुनको भाउमा भारी गिरावट, किनेर राख्ने बेला यही हो त ?
काठमाण्डौ । चाडपर्वको सिजन सुरु भइसकेको अवस्थामा नेपाली बजारमा सुनको भाउ भने लगातार घटिरहेको छ । भाउ घटेसँगै बजारमा सुनको कारोबार पनि बढ्न थालेको छ ।
लगातार दुई सातादेखि सुनको भाउमा गिरावट आइरहेको छ । पहेँलो धातु सुनको भाउ फेरि आज मंगलबार एकैपटक तोलामा ८०० रुपैयाँ घटेको छ ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार मंगलबार तोलामा ८०० रुपैयाँले घटेर सुनको भाउ प्रतितोला छापावाल ६९ हजार २०० रुपैयाँ र तेजाबी ६८ हजार ९०० मा झरेको छ ।
विश्लेषकहरुले सुन यतिखेर किन्दा फाइदा हुने बताउँछन् । चाडपर्वको सिजन सकिएलगत्तै विवाहवारीको सिजन सुरु हुने भएकोले सुनको भाउ पुनः बढ्न सक्ने उनीहरुको आँकलन छ ।